Tag: aha | Martech Zone
Monday, April 5, 2021 Tuesday, August 24, 2021 Douglas Karr
Nchịkọta Google na WordPress NDipMỌD my: Gịnị bụ ọdịnaya m dị elu?
Tọzdee, Nọvemba 23, 2006 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Nchịkọta Google bụ ngwugwu siri ike ma mgbe ụfọdụ ịchọrọ ịchọ gburugburu maka Ama ịchọrọ. Otu ihe ịchọrọ iji lekwasị anya na WordPress Blog bụ otu esi ewu ewu ọdịnaya gị. E nwere ụzọ abụọ iji chọpụta ọdịnaya gị: Site na peeji nke Site na isiokwu isiokwu N'okpuru ebe a bụ nseta ihuenyo na otu esi elele ọdịnaya gị kacha elu. Họrọ ubochi nke ubochi ma ichota ihe ndi choro.